Izinto zokupholisa ii-aluminium zeplastiki
I-aluminium foil bag epholileyo inokusetyenziswa kwiipiknikhi zangaphandle okanye kubomi bemihla ngemihla. Isetyenziselwa ukubamba ukutya okwahlukeneyo kunye nokugcina iqondo lobushushu kunye nokutya okutsha. Luhlobo lokupakisha lwangaphandle.
I-Canvas Cotton epholile yesidlo sasemini eshushu
Ukugquma iingxowa ezipholileyo ze-thermal, ezikwabizwa ngokuba ziifriji ezingenzi nto, ziingxowa ezinobushushu obuphezulu kunye nefuthe lobushushu rhoqo (kushushu ebusika kwaye kupholile ehlotyeni).
Ingxowa ephathekayo yeDuffel yokuHamba
Zininzi iindlela zokuthambisa iibhegi zokwenza umthambo, ezinje ngoobhaka, iibhegi zabathunywa, iibhegi, njalo njalo. Ngokubanzi, amadoda kufuneka akhethe amagxalaba aphindwe kabini, alungele ukuphatha.
Ukuhlala ubukhulu beebhegi ezinkulu zempahla yokuhamba kunye nezihlangu
Yintoni i-duffle? Ingxowa yokufaka impahla, ikwabizwa ngokuba yingxowa yokuhamba, ibhegi yemithwalo, ibhegi yokuzivocavoca, kwaye yenziwe nge-oxford, nyon, ipholiyesta kunye nelaphu elenziweyo. Abantu bayathanda ukuyisebenzisa ekuhambeni, kwezemidlalo kunye nokuzonwabisa ngabantu.
Ipholiyesta Suit Bag
Kule mihla, zininzi iisuti ezibizayo kwimarike. Into ebalulekileyo kukukhusela iisuti ezibizayo kunye nempahla. Iimpawu ezininzi ezidumileyo ziya kukhetha ibhegi yesuti ukugcina iisuti zintsha ngexesha lenkqubo yokugcina.
I-Eco Friendly Canvas Cotton Garment Suit Cover
Yintoni ikhuselo lesuti yengubo? Ingxowa yesuti yengubo yesambatho yinto eqhelekileyo kuhambo lweshishini okanye kukhenketho. Isigqubuthelo sesuti sithambile, esenzelwe ukuba sithwale esihlala sigcinwa kwihanger.
Wine Non womluki Bag
Isikhwama sokuthenga iwayini siyimfuneko kwivenkile yotywala. Ngokubanzi, ezi venkile zinokukhetha imibala eqaqambileyo. Kukho imibala emininzi enokukhethwa. Ngaphandle kombala, unokuprinta ilogo yakho kwiingxowa. Ibhegi yewayini zinokwenziwa non ephothiweyo, pp ephothiweyo, umqhaphu kunye ipholiyesta. Kunzima kakhulu kwaye kufanelekile.
Iphepha leTyvek epholile manzi
Iphepha elipholileyo leTyvek lisetyenziselwa izinto ezinobungozi bendalo, ezifana nemveliso yeplastiki, inokuhlamba ngokuphindaphindiweyo, kwaye iyamelana nokukrazula. Into ebalulekileyo yile nto i-eco-friendly, ke iyasebenza kwakhona.
Bag ephothiweyo Non uhlobo olunye lwengxowa lokuthenga. Ilungele ukusetyenziswa kwemihla ngemihla eyenza ilogo yakho eyeyakho, uphawu okanye isilogeni ubuye yonke imihla ezitalatweni, ezikolweni, kwiipaki, kwiivenkile ezinkulu. Umtya wegxalaba uhlengahlengiswa, oko kwenza ukuba kube lula ukuba iibhegi zamagxa zisetyenziswe ngabancinci nabadala.
Iphepha lokuthenga iNgxowa
Ibhegi yokutya yephepha ibiyingxowa ye-eco iminyaka emininzi. Kudala-dala, abantu babesebenzisa ilaphu kunye nejute bag ukupakisha iimpahla. Kwimpahla encinci, abathengisi bangathanda ukusebenzisa ibhegi yephepha ukubeka izinto, ezinjengevenkile yeelekese, abathengisi, ababhaki, njalo njalo.